FA-da England oo Ganaaxday Xubin ka tirsan Macallimiinta Chelsea, sabab la xiriirta Jose Mourinho Awgeedi!!
Thursday, April 25th, 2019 - 12:56:38
Wednesday October 31, 2018 - 14:18:01 in Wararka by Muuse Cabdi
Chelsea Macallinkeeda Marco Ianni ayaa la ganaaxay Lacag, ka gadaal markii uu ku hor dabbaal degay Tababare Jose Mourinho ciyaar xiiso laheyd oo ay kooxdiisu la ciyaartay Chelsea.
Ganaaxa lagu riday Macallin Ianni ayaa gaaraya inuu bixiyo lacag dhan £6,000 keddib dabbaal deg dagaal sababi gaaray oo uu ku hor sameeyay Mourinho kulankii ku dhammaaday 2-2 ee ay kooxdiisu la gashay Manchester United horraantii Bishan.
Keddib goolkii Garab dhaca ee uu dhaliyay Ross Barkley waqtiga dhimashada ciyaartii Stamford Bridge, Ianni ayaa ku hor dabbaal degay kana Cararay Mourinho iyadoo la arkayay inuu taas caro ka muujiyay tababaraha Manchester United.
Mourinho ayaa jawaab adag ka bixiyay dhaqankaas uu sameeyay macallinka reer Talyaani, balse Booliska ayaa xakameeyay Mourinho iyo Caradiisaba isagoo uga daba tegi gaaray Qeybta Marinka Ciyaartoyda ee marka garoonka lasoo galayo.
Ianni ayaa aqbalay Ganaaxa FA kaasoo la xiriira inuu ku dhaqmay Dabeecad aan habbooneyn.